अनुदानमा चित्तदुखाइ- विविधा - कान्तिपुर समाचार
बजेटको अधिकांश हिस्सा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी (सेयर लगानीसहित), सुरक्षा, परराष्ट्र, सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारीको निवृत्तिभरण, संवैधानिक आयोग, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना आदिसँग सम्बन्धित आयोजना तथा कार्यक्रमहरूका लागि खर्च हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको एक प्रतिवेदनअनुसार कुल बजेट विनियोजनमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि करिब १० प्रतिशत र निश्चित कार्यक्षेत्र तोकिएका कार्यक्रमका लागि पाँचदेखि सात प्रतिशत बजेट वितरण हुने गर्छ । यस अलावा केन्द्रीय मन्त्रालय र निकायका लागि पनि त्यत्तिकै बजेट विनियोजन हुन्छ । यस वास्तविकतालाई आकलन गर्दा पनि २०७६/७७ मा प्रदेश र स्थानीय तहले कुल बजेटको करिब ३१ प्रतिशत हिस्सा प्राप्त गरेका छन्। यो हस्तान्तरण कुल प्रक्षेपित राजस्व रु. ९८१ अर्बको करिब ४८ प्रतिशत हो ।
कार्तिक १०, २०७६ मधु राई
युकेजीको कक्षाकोठामा प्रवेश गरेपछि म विद्यार्थीहरूलाई दुई हात जोडी अभिवादन गर्ने गर्छु  । पहिले ‘नमस्ते’ वा ‘नमस्कार’ भन्ने गरेकी छु अनि ‘गुड मर्निङ’  ।
त्यसपछि समुदायविशेषले प्रयोग गर्ने अभिवादनका शब्द सिकाउँछु । जस्तै— मधेसीमूलका विद्यार्थीहरूलाई ‘जय महादेव’ र आफू किराती भएकाले ‘सेवारो’ पनि भन्न सिकाउँछु । त्यही सिको गर्दै बालविकास र शिशु कक्षाका कतिपय विद्यार्थीले भेटेपिच्छे मलाई हँसिलो अनुहारसाथ ‘नमस्ते म्याम’ भन्ने गरेका छन् ।
तर, बालविकास कक्षामा केही दिनमै सिकेका यस्ता शब्दहरू विद्यार्थीले निजी विद्यालयको प्राथमिक तहमा जान थालेको केही महिनामै बिर्सने गरेको मैले पाएकी छु । बाटाघाटामा भेट्दा अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई ‘एइ चिनेनस् ? म्यामलाई नमस्ते गर् !’ भन्ने गर्छन् । अभिभावकको करबलले गरेको नमस्ते स्विकार्न मलाई बेलाबेला असहज महसुस हुने गर्छ ।
जुनसुकै समाजमा संस्कारयुक्त शिक्षाको कुरा गर्दा सर्वप्रथम शिष्टाचारको सन्दर्भ आउँछ । नेपाली समाजमा सिकाइने शिष्टाचारको पहिलो पाठ भनेकै नमस्ते हो । तर, शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीहरू यसबारे अनभिज्ञ हुँदा साना कक्षामा सिकेका अभिवादनका शब्दहरू कतिपय विद्यार्थीले कालान्तरमा करबलमा मात्र प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यसो हुनुमा निजी विद्यालयको अंग्रेजी वातावरण पनि एक हो भन्नेमा दुईमत छैन ।
प्रायः निजी विद्यालयले विद्यालय परिसरमा ‘इङ्लिस स्पिकिङ जोन’ लेखिएका सूचना टाँसेका हुन्छन् । बिर्सेर नेपाली बोले पनि जरिवाना तिराइन्छ वा सजाय दिइन्छ । नेपाली बोल्ने विद्यार्थीको हुर्मत लिने विद्यालय व्यवस्थापन र शिक्षकका कारण अभिभावादनका हाम्रा मौलिक शब्दहरू लोप हुने जोखिम बढ्दै गएको छ ।
अझ कतिपय शिक्षक र अभिभावक त शिष्टाचारबाटै अनभिज्ञ रहे जस्ता देखिने गरेका छन् । त्यस्ता व्यक्तिको अनुहार सधैं रिसाएको वा ठुस्स परेको देखिन्छ । विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्, अभिभावक र शिक्षकको प्रायः गुण वा विशेषता छोराछोरीमा स्वतः सर्दै जान्छ । अनि यस्ता अभिभावक र शिक्षकसँग दिनहुँ उठबस गर्ने छोराछोरी र विद्यार्थीले पनि शिष्टाचार भुल्दै जान्छन्, संवेदनहीन
बन्दै जान्छन् ।
औपचारिक शिक्षालाई मानिसको जनजीवनसँग जोड्न शिष्टाचारले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । ससाना विद्यार्थीले दुवै हात जोडी अनुहार हँसिलो बनाई ‘नमस्ते म्याम’ भन्दा र हामीले पनि सोही मुद्रामा अभिवादन फर्काउँदा शिक्षक–विद्यार्थीकै मन फुरुङ्ग हुने गर्छ ।
यसबाट शिक्षक–विद्यार्थी सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन सहयोग पुग्छ । दुवैमा सकारात्मक ऊर्जा थपिन्छ । दुवैबीच अपनत्व बढ्छ । सिक्ने र सिकाउनेबीच राम्रो सम्बन्ध स्थापित भए मात्र शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी हुन्छ भन्ने अध्ययन–अनुसन्धानले देखाएका छन् ।
औपचारिक शिक्षाका प्रारम्भिक वर्षहरूमा विद्यालयमा अभिवादन दर्शाउने शब्द सिकाउन सके शिक्षणसिकाइ रमाइलो र प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विकसित मुलुकको अभ्यासले देखाउँछ ।
हामीकहाँ पनि यस्तो चलन सुरु गर्नु जरुरी छ । बालबालिकालाई अभिभावकले घरमा र शिक्षकले विद्यालयमा अभिवादनको महत्त्व बुझाउन सके त्यो संस्कारयुक्त शिक्षणसिकाइको प्रवेशविन्दु हुन सक्छ । तर, यसका लागि अभिभावक र शिक्षकले पहिले अभिवादनलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ ।
प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७६ ०८:३२